Leonardo DiCaprio က BATMAN ရဲ့ ရန်သူတော်ဖြစ်လာနိုင်သလား? – REDPlayer
Leonardo DiCaprio က BATMAN ရဲ့ ရန်သူတော်ဖြစ်လာနိုင်သလား?
[image by DC]
သိပ်မကြာခင်က Batman ရဲ့ အဓိက ရန်သူတော်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Joker ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ရုပ်ရှင်အသစ်တစ်ကား ရိုက်တော့မယ်လို့ အသံကြားထားတာရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူကတော့ legendary Director လို့နာမည်တပ်ရတဲ့ Martin Scorsese (မာတင် စကော့စီးစ်) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
The Hollywood Reporter ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်အရ၊ အော်စကာဆုရမင်းသားကြီး Leonardo DiCaprio ကို Joker နေရာမှာ မျက်စိကျနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့ချင်းတော့ စကားမပြောရသေးပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒါရိုက်တာကြီး နဲ့ Warner Brothers ကတော့ မျက်စပစ်နေကြပြီလို့ အသံတွေထွက်လာပါတယ်။
ဒါရိုက်တာကြီးနဲ့ Leonardo တို့က အခုမှ တွဲရိုက်ကြမယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ The Departed, Gangs of New York, The Aviator နဲ့ The Wolf of Wall Street ရုပ်ရှင်တွေမှာ လက်တွဲခဲ့ပြီးသားပါ။ တစ်ကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကားတွေမှာ လက်တွဲခဲ့ကြတာပါ။ ဒီ Joker ရုပ်ရှင်မှာတော့ Hangover ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Todd Phillips ကတာဝန်ယူထားပါတယ်။
Suicide Squad တုန်းက တော့ Jared Leto က joker အဖြစ်ပါခဲ့ပါတယ်။ သူကလည်း နောက်ဆက်တွဲ Joker သီးသန့်တစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိနေတဲ့ အတွက် ဒီလို Joker ၂ယောက်ဖြစ်လာမှာကို သိပ်ဘဝင်မကျဘူးလို့ သူ့ရဲ့ Agent တွေက တဆင့် အသံလွှင့်ထားပါတယ်။
တစ်ခုခုသေချာဖို့ကတော့ အရမ်းစောနေတယ်ဆိုပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Leonardo ကြီးကို joker အဖြစ်မြင်ချင်ကြရဲ့လား? Comment မှာ ဆွေးနွေးကြတော့ဗျာ…
Xbox One ကို keyboard နဲ့ mouse တွဲဆော့လို့ရတော့မှာလား